Ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo : NANOME 2,700 TAPITRISA DOLARA NY AMERIKANINA -
AccueilVaovao SamihafaAdy amin’ny tsy fanjarian-tsakafo : NANOME 2,700 TAPITRISA DOLARA NY AMERIKANINA
Ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo : NANOME 2,700 TAPITRISA DOLARA NY AMERIKANINA
31/01/2017 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Nitondra fanampiana mitentina 2 700 000 dolara ho an’ny fanjakana malagasy ny goverenemanta amerikana, ahafahana miatrika ny olan’ny haintany any amin’ny faritra Atsimo ary mampirisika ny hanaovana antso avo momba ny hamehana. Io no votoatin’ny fitsidihana nataon’ny masoivoho Amerikanina sy ny rantsa-mangaikan’ny USAID, tamin’ny Praiminisitra Lehiben’ny Governemanta, Mahafaly Solonandrasana Olivier omaly tolakandro teny Mahazoarivo. Laharam-pahamehana ny fikarohana ny fampandrosoana maharitra ho an’ny firenena. Niompana indrindra ho an’ny famahana ny olana any amin’ny faritra Atsimo ny resaka nifanaovan’ny roa tonta. Notsindrian’ny ny masoivoho amerikana Robert Yamate fa “manodidina ny iray tapitrisa ireo olona izay tsy ampy sakafo. Ny fotoana anatin’ny vanim-potoanan’ny maitso ahitra toa izao no fotoana tena mahasahirana ny mponina ary fotoana fandraisana andraikitra ho an’ireo mpandray anjara rehetra”. Zava-dehibe no tokony hanaovan’i Madagasikara antso avo hiatrehana ny hamehana, izay hanokatra varavarana ahafahan’ny fianakaviambe iraisam-pirenena mampitombo ny fanampiana ho an’i Madagasikara. “Tara dimy ka hatramin’ny valo herinandro teo ny fotoam-piotazana noho ny fahataran’ny fotoam-pahavaratra ; izay no mahatonga ireo mponina hila fanampiana hoentin’izy ireo miatrika ny fahalavan’ny vanim-potoanan’ny maitso ahitra. Ity vola fito hetsy sy roa tapitrisa dolara izay nampahafantarina androany ity dia homena ny fandaharan’asan’ny firenena mikambana momba ny sakafo na PAM hanohizan’izy ireo ny asa fanomezana sakafo isan’andro ho an’olona miisa 260 000,” raha ny nambaran’ny talen’ny USAID Madagasikara Michelle Godette.
Fanampiana 39 tapitrisa dolara…
Efa tamin’ny taona 2014 ny governemanta amerikana no lohalaharana nanome fanampiana hiatrehana ny hamehana tany Atsimon’i Madagasikara ary nanome fanampiana sy sakafo mitentina 39 tapitrisa dolara. Ny governemanta amerikana tamin’ny alalan’ny USAID, dia namatsy vola ny asa nataon’ny Catholic Relief Services (CRS), ny fandaharan’asan’ny firenena mikambana momba ny sakafo (PAM), ny Adventist Development and Relief Agencies (ADRA), ary ireo rafitra hafa. Misy ny fiaraha-miasa eo amin’ireo rafitra ireo hiantohana ny firindran’ny ezaka ataon’izy ireo sy ahafahany mifanampy raha sendra misy fahatapahany ny famatsiana sakafo. Ny fandaharan’asa “Food for Peace”an’ny USAID no nanome io kitapom-bola io izay hampiasaina hividianana sakafo toa ny vary sy ny voamaina hozaraina amin’ireo mponina sahirana noho ny tsy fahampian’ny sakafo. Omaly ihany koa no nilazan’ny praiminisitra fa “samy nahatsapa ny rehetra fa ilaina ny fiaraha-miasa sy ny fandrindrana ny asa mba ahatonga azy hipaka any amin’ny vahoaka amin’ny faritra Atsimo. Amin’ny alalan’ny governemanta malagasy sy ny Filoham-pirenena no isaorako ny fitondram-panjakana Amerikanina amin’ny alalan’ny USAID amin’ny tolo-tanana omen’izy ireo. Mirotsaka an-tsehatra amin’ny alalan’ny fanampiana vonjimaika izy ireo ho an’ireo sahirana any Atsimo fa ny zavatra anisany nisongadina androany dia ny fanambaran’ny USAID fa miasa ho an’ny fotodrafitrasa maharitra izy ireo. Tanjon’ny Filoham-pirenena indrindra izay satria ny tsara dia ny fametrahana fotodrafitrasa maharitra. Hita ao anatin’izay fotodrafitrasa izay ny mahakasika ny rano, ny fambolena, ary ny lalàna. Tsy afaka ny hihambo ahavita tena samirery ny Malagasy fa ilaina ny mpiara-miombon’antoka amin’ny alalan’ny tolo-tanana. Efa manana paikady ny governemanta amin’ny fametrahana fotodrafitrasa maharitra toa ny fikarakarana ny any Atsimo”.